Sideed sano kadib, Tiyaatarka Qaranka maxaa iska-bedelay? | Keydmedia
Sideed sano kadib, Tiyaatarka Qaranka maxaa iska-bedelay?
Deeq dhaqaale oo ay bixiyeen ganacsato Soomaaliyeed iyo xoog muwaadiniinta ayaa suurtagelisay in dib loo dhiso Tiyaatarka Qaranka, sida uu sheegay Agaasime Cabdi.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sideed sano markii qof isku qarxiyay, dowladda Soomaaliya ayaa dib u furtay Tiyaatarka Qaranka oo ku yaalla nawaaxiga Villa Soomaaliya kadib markii lagu dhisay olole dadweyne oo loo bixiyay Is-xilqaan.
Tiyaatarka oo astaamaha qaranka kamid ah ayaa la dhisay 1967, wuxuuna ku xirmay dagaalladii Sokeeye ee billowday 1991, balse hadda dib ayuu usoo noolaaday. Waxaa muuqda rajo nabadeed iyo dib usoo noqoshada dowladnimada.
Sanadkii 2012 ayaa dib waxaa u furtay dowladdii Sheekh Shariif, sanad kadib markii Al-Shabaab laga saarey magaaladda, laakiin todobaadyo kadib waxaa ka dhacay qarax Ismiidaamin ahaa, oo lala eegtay Ra’iisul Wasaarihii xiligaas Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Agaasimaha Tiyaatarka, Cabdi C/llaahi ayaa sheegay in shaqo badan la geliyay dib u dhiska Tiyaatarka, isagoo intaasi ku daray in kun baabuur oo qashin iyo carro ah laga bixiyay dhismaha oo burbur ka muuqday.
Wuxuu xusay Agaasimaha in lagu qaban doono Tiyaatarka ruwaayadihii iyo heesihii horey looga bartey, iyadoo amniga goobta loo xilsaarey Ciidan gaar ah oo ilaaliya, si aysan Al-Shabaab u qarxin markale.